कालिका लघुवित्तको नाफामा उछाल, ईपीएस रु. ३१.७५ Bizshala -
कालिका लघुवित्तको नाफामा उछाल, ईपीएस रु. ३१.७५
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ६ करोड रुपैयाँ बढी नाफा आर्जन गरेको छ।
आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा ६ करोड ९७ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको हो। जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १३६४ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ४१ लाख ५ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो।
संस्थाको रिजर्भको आकार पनि २१.०३ प्रतिशतले बढेर १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँको भएको छ। गत वर्ष रिजर्भमा १४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
चुक्तापुँजी २५ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको संस्थाको वार्षिकीकृत प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ३१.७५ रुपैयाँ रहेको छ। मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) ४३.४९ गुणा रहेको संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ १७०.४५ रुपैयाँ रहेको छ।
Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Q3 2077/78